We hope our residents hadawonderful Christmas with family & friends, enjoyed the various exclusive activities we have organised within the safe bubble for you. Before we launch intoagreat new year, it is imperative we thank all our residents for everything that you did to keep our lifestyle community safe yet vibrant.
ကြည်နူးစရာခရစ်စမတ်ကာလမှာ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်း နေထိုင်သူများအတွက်အထူးပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပွဲအစီအစဥ်လေးတွေကြောင့် ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ပျော်ရွှင်ရင်း အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မကူးပြောင်းမီအချိန်လေးမှာ လုံခြုံနွေးထွေးမှုရှိပြီး တက်ကြွတဲ့ လူနေမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို ဝိုင်းဝန်းပုံဖော်ပေးတဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ အိမ်ရာဝင်းအတွင်း နေထိုင်သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
Looking back, the year had been eventful; alternating between working from home and the office, from booking our international flights to staycation, from board meeting to zoom meetings, from beauty face masks to mandatory protective facemasks. With the discovery of the vaccines, we certainly have high hopes for the new year!
Our January newsletter, besides featuring promotional activities and services, will also 2021 lifestyle and work trends. From our families to yours, wishing allaprosperous and wonderful 2021!
Pun Hlaing Management
၂၀၂၀ ခုနှစ်ကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေ အပြည့်ပါပဲ။ အိမ်မှာနေပြီးအလုပ်လုပ်ရတာ၊ ရုံးကိုခဏတဖြုတ်သာသွားလိုက်ရတာ၊ နိုင်ငံတကာအပျော်ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်ကနေ မြို့တွင်းဟိုတယ်တွေမှာပဲ အပန်းဖြေ ကျေနပ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေဟာ zoom ကတဆင့် ပြုလုပ်ရတဲ့ ဖန်သားပြင်အစည်းအဝေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာ၊ အသားအရည်လှပဖို့အတွက် သုံးတဲ့ Face Masks တွေအပြင် မဖြစ်မနေလိုက်နာဝတ်ဆင်ရတဲ့ နှာခေါင်းစည်း မျက်နှာဖုံးတွေကိုပါအသုံးပြုလာရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ တနှစ်လုံးပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာတာနဲ့အမျှ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
ယခုလ ဇန်နဝါရီလသတင်းစာစောင်လေးမှာတော့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာ ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင် လာမဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ရေပန်းစားလာနိုင်တဲ့ နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတွေ၊ လုပ်ငန်းတွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အားလုံးအတွက် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာများနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေကြောင်း ပန်းလှိုင်မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
A NEW YEAR OF GREAT EXPECTATIONS
The world's endeavor to create an effective vaccine is bearing fruit. A handful of vaccines are now authorised around the globe, with many more in positive development. Here's an overview.
ကမ္ဘာ့လူသားတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကတော့ အရာထင်လာပြီလို့ ပြောလို့ရနေပါပြီ။ ကာကွယ်ဆေးအချို့က ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီး တော်တော်များများကလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ရရှိလို့နေပါပြီ။ အကျဥ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ကို အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
WHAT'S NEW FOR OUR RESIDENTS
Stay fit and healthy during coronavirus pandemic
While staying active during lockdown could beareal struggle, we are fortunate to live inalow density estate that comes fully equipped withacountry club, tennis courts, gym, outdoor pool; and an 18-hole world class golf course and academy. Contact Ms Suji Choi at sujichoi@memoriesgroup.com to sign up or renew your membership now!
Coronavirus ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာ ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံ ရရှိအောင်နေကြမယ်
Lockdown တွေပြုလုပ်ထားစဉ် ကာလအတွင်းမှာ တက်ကြွတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရရှိဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးတဲ့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာတော့ facilities အပြည့်အစုံပါဝင်တဲ့ country club အတွင်းမှာ တင်းနစ်ကွင်း၊ gym၊ ရေကူးကန် တို့ရှိနေတဲ့အပြင် ကျင်း ၁၈ ကျင်းပါဝင်တဲ့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းနဲ့ ဂေါက်ရိုက်သင်တန်းကျောင်းတို့ ရှိနေတဲ့အတွက် ကျန်းမာရွှင်လန်းစေတဲ့ လူနေမှုပုံစံရရှိဖို့ ရာ မခက်ခဲလှပါဘူး။ Country Club မှာ အဖွဲ့ဝင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ သက်တမ်းထပ်မံတိုးလိုလျှင်ဖြစ်စေ Country Club Manager, Ms. Suji Choi : sujichoi@memoriesgroup.com ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Country Store Promotions
Our shelves are stocked with small-batch snacks, imported wines and fresh flowers to brighten your homes. Takealook around for your favorite foods and wines at our Country Store.
Country Store မှာ အဆာပြေစားလို့ရတဲ့ မုန့်ပဲသရေစာတွေအပြင် ပြည်ပကတင်သွင်းထားတဲ့ ဝိုင်အမျိုးအစားအစုံအလင်ကိုလည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး မုန့်လေးတွေ၊ ဝိုင်လေးတွေရရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါ။
PRE-WEDDING DESTINATION PHOTO SHOOT
The wellness estate is probably the best spot in Yangon foradestination pre-wedding shoot! Contact us at corporatemarketing@yomaland.com​ for more info.
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရဲ့ စိမ်းစိုပြီး တိတ်ဆိတ်သာယာလှပတဲ့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာ ဟာ pre-wedding ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သူတွေအတွက်တော့ နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။
BAMBOO HOUSE - NEW!
Bamboo-influenced Myanmar restaurant and beer garden coming soon to Pun Hlaing. The garden at Pun Hlaing is anticipating openinga100 outdoor garden restaurant early January. Inspired by Bamboo and beer gardens around the world, the eatery will offer Myanmar-style and BBQ. The menu at Bamboo House will include Mohinga, sandwiches, light salads, finger food, BBQ andarange of beers.
ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ လေကောင်းလေသန့်ရှုရင်း အစားအသောက်တွေမြည်းစမ်းစားသောက်နိုင်မယ့် နေရာလေးတစ်ခု ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာ ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ အယောက် (၁၀၀) အထိ လာရောက်စားသုံးနိုင်မယ့် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာက ဝါးအိမ်လေးကို ဇန်နဝါရီလအစမှာ ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါ။ ကမ္ဘာအနှံ့က ဝါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်ပုံစံများ၊ လေဟာပြင်စားသောက်ဆိုင်နေရာလေးများကို အတုယူဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ နေရာလေးမှာ မြန်မာအစားအစာတွေနဲ့ အတူ BBQ အသားကင်တွေကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝါးအိမ်ကလေးမှာ ပါဝင်မယ့် အစားအသောက်တွေကတော့ မုန့်ဟင်းခါး၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်များ၊ အရွက်သုတ်များ၊ အဆာပြေအစားအစာများ၊ အသားကင်များနှင့် ဘီယာတွေကို မှာယူသုံးဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Refer your friends to Pun Hlaing. From friends to neighbours. Contact +95 (9) 777229339 or email punhlaingrentals@yomaland.com
အိမ်အငှား - မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ညွှန်းဆိုပေးခြင်းဖြင့် ခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မယ့် အစီအစဥ်
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို ပန်းလှိုင်အိမ်ရာကိုညွှန်းပေးခြင်းဖြင့် အိမ်နီးချင်းဖြစ်နိုင်မယ့် အစီအစဉ်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက +95 (9) 777229339 (သို့မဟုတ်) punhlaingrentals@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Selected Properties only! Special promotion for Lakeview Condo and Rose Garden Villa
Lakeview Condo owner offers one-time complimentary relocation fee plus management fee for new renter. Rose Garden Villa owner offers complimentary management fee plus landscaping fee for new renter. Contact +95 (9) 777229339 or email punhlaingrentals@yomaland.com for more info
Lakeview Condo နှင့် Rose Garden Villa များအတွက် အထူးပရိုမိုးရှင်း။
Lakeview Condo ပိုင်ရှင်မှ အိမ်ငှားအသစ်များအတွက် ပြောင်းရွှေ့မှုတစ်ကြိမ်အခမဲ့အပြင် အိမ်ရာထိန်းသိမ်းပြုပြင်ကြေးကိုပါ အခမဲ့ ပေးအပ်သွားမယ့် အထူးအခွင့်အရေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ Rose Garden Villa ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ အိမ်ရာထိန်းသိမ်းပြုပြင်ကြေး နှင့် ပန်းမန်ထိန်းသိမ်းကြေးများကို အိမ်ငှားအသစ်များအတွက် အခမဲ့ပေးဆောင်ပေးမယ့် အခွင့်အရေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက +95 (9) 777229339 သို့မဟုတ် email punhlaingrentals@yomaland.com
HIGH END LIFESTYLE ESTATE OPPORTUNITY IN YANGON
Special privileges for residents who wish to invest in another property. Contact our sales at +95 (9) 777229449 for more information.
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်းက ရောင်းချရန်ရှိသည့် အိမ်ရာအသစ်များ
အိမ်ရာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုထပ်မံပြုလုပ်လိုတဲ့ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအတွက် အထူးအခွင့်အရေး။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန် +95 (9) 777229449
Celebrities Nay Chi Oo and Aung Ye Lin acceptedalifestyle challenge at the estate! Click here to watch!
APPLY FOR YOUR DULWICH SCHOLARSHIP NOW
If you wish to enjoy full access to our internationally renowned golf course, you can sign up for your membership here: phgc@yomaland.com.
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ကျင်း ၁၈ ကျင်းပါဝင်တဲ့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမှာ အဖွဲ့ဝင်လိုပါက phgc@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
It's 2020 final countdown. But first, Party…
A special party to celebrate the new beginning ofaprosperous 2021 at Awei Metta! Let’s make many pour decisions together.
Because of health and safety guidelines, there will be limited reservations available for all dinners and festivities. We will only be accepting guests on RSVP basis.
Please contact us soonest to secure your New Year’s Eve celebration at events@aweimetta.com or call +959459 932055 / +959250 294669.
A MESSAGE FROM PUN HLAING HOSPITALS
To our valued Pun Hlaing Estate, we would like to thank you for placing your trust in us, and in turn, we always strive for excellence everyday to provide you with the best healthcare services in Yangon.
At Pun Hlaing Hospitals Hlaing Tharyar, we always put safety first in everything we do, including during surgical procedures by implementing the safest practices before, during, and after all our procedures.
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အိမ်လေးအမြဲတမ်းတောက်ပြောင်သန့်ရှင်းလှပနေဖို့ဆိုရင် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာက အိမ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုလေးကို သတိရလိုက်ပါ။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိလို့နေပါတယ်။ Ext နံပတ်0ကို ခေါ်ယူပြီး ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
BRAND AWARENESS - FLAGPOLE ADVERTISING
If you are keen to promote your brand to the community in Pun Hlaing, please contact corporatemarketing@yomaland.com
THE FUTURE OF PUN HLAING
Stephen Purvis, Head of Yoma Land, on upcoming projects and developments at Pun Hlaing residential estate.
Yoma Land ရဲ့ Head ဖြစ်တဲ့ Stephen Purvis က ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်းမှာ ရှေ့ဆက်ပြုလုပ်သွားမယ့် ပရောဂျက်အသစ်တွေနဲ့ တိုးတက်မှုအသစ်တွေအကြောင်းရှင်းလင်းပြောပြာထားတဲ့ video လေးကို ကြည့်ရှုကြည့်လိုက်ပါ။
Christmas is the spirit of giving withoutathought of getting. It is happiness because we see joy in people when we share. It is forgetting all the circumstantial limitations and start living. Together with Pun Hlaing residents, we donated Christmas present to orphans at Victory Orphanage.
ခရစ်စမတ်ကာလဆိုတာ ပြန်လည်ရယူလိုမှုတွေကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပဲ ပေးကမ်းဝေမျှမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ အချိန်အခါလေးပါ။ ဝေမျှမှုတွေကြောင့် လူတွေပျော်ရွှင်သွားတာကို မြင်တွေ့ရတာဟာ ချမ်းမြေ့မှုတစ်ခုပါပဲ။ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာအနေနှင့်လည်း အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူတွေနဲ့အတူ Victory မိဘမဲ့ဂေဟာမှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်များကို လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
JANUARY RESIDENTS' FEATURE
"ကျွန်မအနေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကိုပဲ ကြိုက်နှစ်သက်တာမဟုတ်ပဲ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို ကယ်ဆယ်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်တာ ပြန်ကောင်းလာရင် လွှတ်ပေးတာမျိုးတွေလုပ်ရတာကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာထဲမှာ ငှက်မျိုးစုံအပြင် လိပ်လေးတစ်ကောင်ကိုပါ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။" - Arti Malhotra
Arti Malhotra, an avid wildlife photographer and conservationist
တိရိစ္ဆာန်လေးများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Arti Malhotra
Mrs. Arti Malhotra has always loved nature and wildlife. Unfortunately the city and her personal life kept her occupied. Since staying in Pun Hlaing, with her daughter off for higher studies, ample free time and some professional guidance, she discovered her latent skill and passion for photography. With some self-taught tutorials and Pun Hlaing acting asafield, she realized that nature and wildlife is the genre she enjoys and want to specialise in. This skill has taught heralot about the behaviour and interaction of birds among themselves and with their habitat.
Mrs. Arti Malhotra ဟာ သဘာဝနှင့် တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဉီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း မြို့ပြနှင့် သူမရဲ့အလုပ်များတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝက သူမကို အခွင့်အရေးမပေးခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ့သမီး နိုင်ငံခြားကို ပညာသင်ရန်ထွက်ခွာသွားပြီး သူမအနေနဲ့ပန်းလှိုင်အိမ်ရာမှာ စတင်ပြောင်းလဲအခြေချချိန်မှာတော့ အားလပ်ချိန်တွေရရှိလာပြီး ပညာရှင်တွေရဲ့ နည်းပြလမ်းညွှန်မှုနဲ့ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံအပေါ်ဝါသနာပါမှုကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာက သဘာဝရှုခင်းတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လေ့လာရိုက်ကူးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူမက သဘာဝနဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုဝါသနာပါပြီး သေသေချာချာလေ့လာလိုက်စားလိုတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ဝါသနာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ နေပုံထိုင်ပုံတွေအကြောင်းကို တဖြည်းဖြည်းပိုမိုသိရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာများ
Adventure student travel forecasts the following emerging trends: No footprint travel, lifestyle flights, offline travel, bleisure, disney travel, farm to fork travel, spartan holidays, nomadic hotels, solo travels: co-living, train travels and travel rewards (credit cards).
၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ရေပန်းစားလာနိုင်တဲ့ ခရီးသွားပုံစံများ
Adventure student travel ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းက ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ ခရီးသွားပုံစံတွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ခရီးသွားလာမှု၊ လူနေမှုပုံစံနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားမယ့် လေကြောင်းလိုင်းများ၊ အင်တာနက်အသုံးမပြုပဲ ခရီးသွားလာမှု၊ အလုပ်လည်းလုပ်အပန်းလည်းဖြေခရီးသွားလာမှု၊ စိုက်ပျိုးရေးခြံများသို့ လေ့လာရေးခရီးစဥ်များ၊ spartan holidays ခရီးစဥ်များ၊ nomadic ဟိုတယ်များ၊ တစ်ကိုယ်တော် ခရီးသွားလာခြင်း၊ ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်း၊ လက်ဆောင်ပေးမည့်ခရီးစဉ်များ (credit cards) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Click here to read full ariticle.
Planning foraday out in Kipling’s style ? Look no further we have it for you to experience ! Please contact Awei Metta Reception or Memories Travel on 09-254052298 for further details !
Kipling ပုံစံနဲ့အလည်ထွက်ဖို့ စီစဉ်နေပြီလား? အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေရရှိနိုင်ဖို့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Awei Metta Reception သို့မဟုတ် Memories Travel တို့ကို ဖုန်းနံပတ် 09-254052298 သို့ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Expect oversized blazers, bold blue bags and accessories, and fashionable face masks dominates.
Spring/Summer 2021 fashion weeks မှ ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင် ၁၀ မျိုး
ကုတ်အင်္ကျီအရှည်များ၊ တောက်ပကြည်လင်တဲ့ အပြာရောင်အိတ်တွေနဲ့ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ၊ ဖက်ရှင်ကျတဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေက ဖက်ရှင်လောကကို လွှမ်းမိုးမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
Work from home ... for real!
When employees were under lockdown orders due to COVID, companies had to quickly adapt operations toaremote workforce. Now that there are some distance and lessons learned from that initial experiment, most businesses are now rethinking their entire business model. Are offices still needed?
အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာမယ့် Work from home
COVID ကြောင့် lockdown တွေပြုလုပ်ရတဲ့အခါမှာ စီးပွားရေးတော်တော်များများက အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအပြောင်းအလဲတွေထဲမှာ ဝန်ထမ်းတွေကိုအိမ်ကနေပြီး အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာတွေလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်တာကနေ ရရှိလာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကနေတဆင့် တချို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက ၎င်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေး ပုံစံအနေအထားကို ပြန်လည် သုံးသပ်မှုတွေပြုလုပ်လာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးတွေက အနာဂတ်မှာ လိုအပ်ပါဦးမလား?
Are you ahead of the curve? Inayear where our lives were turned upside down, our eating and drinking habits changed accordingly. And with health at the forefront of the conversation for the foreseeable future, foods that enhance immunity and keep us healthy rule the day. The year ahead will deliver more plant-based options, tech-assisted products andaspotlight on BIPOC-owned food businesses. Let’s dive into the 2021 food landscape.
Dietitian ရဲ့ အဆိုအရ ၂၀၂၁ မှာ ခေတ်စားလာနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာများ
သင်ကခေတ်ရှေ့ပြေးသူတစ်ယောက်လား? ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားခဲ့သလို နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေကလည်း လိုက်လံပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ကြိုတင်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့ အနာဂတ်မှာတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် အစားအစာတွေက လွှမ်းမိုးလာမယ်ဆိုတာတော့ အသေအချာပါပဲ။ နောင်လာမယ့်နှစ်မှာ အသီးအရွက်ကို အခြေခံထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ BIPOC အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေက လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အများဆုံးရရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အစားအသောက်ပင်လယ်ကြီးထဲ ခုန်ဝင်လိုက်ကြရအောင်။
Myanmar launches no-land sightseeing flights to boost tourism
Myanmar’s first non-landing sightseeing flight tour to Kyaik Htee Yo and Zwekabin Taung, operated by Myanmar National Airlines, was successfully conducted on December 20. The flights flew ataheight of 5,000ft for the Kyaik Htee Yoe tour and at 3,000ft for the Zwekabin tour. The tours were conducted as part ofapilot project by the Ministry of Hotels and Tourism and tour operators in Myanmar in efforts to revive interest in domestic tourism. Efforts to expand flight and cruise tours will continue depending on the public’s response and interest, said U Naing Win,adirector at the Directorate of Hotels and Tourism.
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်ဦးမော့လာစေရေးအတွက် မြေပေါ်မဆင်းပဲ ရှုခင်းတွေကြည့်ရှုနိုင်မယ့် လေကြောင်းလိုင်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းကပြုလုပ်တဲ့ မြေပေါ်မဆင်းပဲ ရှုခင်းကြည့်နိုင်မယ့် လေကြောင်းခရီးစဥ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျိုက်ထီးရိုးနှင့် ဇွဲကပင်တောင်များသို့ အောင်မြင်စွာစတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုး ခရီးစဉ်အတွက် အမြင့်ပေ ၅၀၀၀ ခန့် မှ ပျံသန်းပြီး ဇွဲကပင်တောင် ခရီးစဉ်အတွက် အမြင့်ပေ ၃၀၀၀ ခန့်မှ ပျံသန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်များဟာ ပြည်တွင်းခရီးသွားလာမှုများပြန်လည် ဦးမော့လာရေးအတွက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြုလုပ်တဲ့ ကနဦး အစီအစဥ်များထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ရေကြောင်းလိုင်းတိုးချဲ့မှုများကို လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး တိုးချဲ့မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ ဦးနိုင်ဝင်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
6 days away from our draw event for Dream Vacation!
Get your tickets now at https://memoriesgroup.com/dreamvacation/ before our ticket sale comes to an end. Stay tuned with us on Memories Group!
Winners will be selected via our Facebook Page streaming, get yourself ready on January 3rd, 2021 for the event here: https://fb.me/e/3nhnG9iu6
Dream Vacation Draw Event စတင်ဖို့အတွက် ၆ရက်သာလိုပါတော့တယ်။
လက်မှတ်တွေ ၂ရက်နေ့ ၁၁:၅၉ pm ထိသာဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မဝယ်ယူရသေးသောသူများအခုအချိန်မှာဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းကောင်းပါးရင်း... stay tuned with us!
Memories Group ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ တိုက်ရိုက်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်နေ့မှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက် ယခုလင့်ခ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားကြပါနော် - https://fb.me/e/3nhnG9iu6
Balloons Over Myanmar - Pun Hlaing Residents Exclusive
35% OFF to fly with Balloons Over Myanmar in Bagan or Inle valid until 31 Dec 2021. Balloons Over Myanmar’s Resident Ticket isaspecial chance to Myanmar nationals and expats residing with valid work visa who have not travelled and experienced Myanmar sceneries for long or have missed out on Buy Now, Fly Later sale.
See you in February! If you would like to contribute any article or share your feedback with us, please send corporatemarketing@yomaland.com your thoughts and suggestions.